sahitya Archives - Khabar Japan - News in Nepali
तपाई यहा हुनुहुन्छ » ख़बर जापान / sahitya
विश्व कविता दिवस मनाइयो
Tags: poetryday, sahitya, worldpoetryday
काठमाडौँ, ८ चैत । विश्व कविता दिवसका अवसरमा नेपाल प्रज्ञा–प्रतिष्ठानले आज यहाँ पुराना नयाँ कविका कविता वाचन कार्यक्रमको आयोजना गरेको छ । संयुक्त, राष्ट्रसङ्घीय शैक्षिक, वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक सङ्गठन (युनेस्को) को आह्वानमा सन् १९९९ देखि हरेक वर्ष विश्वभर मार्च २१… बाँकी अंश »
Tags: alert-news, book, featured, kinarakomanchhe, nepaliliterature, nepalisahitya, newnepalibook, sahitya, story
काठमाडौँ, ३ फागुन । नेपाली पाठकले सानैमा बिहे गरेका, लोग्नेले भकुरेका, घरभरि बकुन्द्रै सन्तान भएका, पेटभरि खान नपाएका, सुढेनी बन्न जाँदा आफैँ बलात्कारमा परेका, नागरिकता नपाएका जस्ता ‘किनाराका मान्छे’को कथा पनि पढ्न पाउने भएका छन् । समाजमा पछाडि पारिएका गरिब,… बाँकी अंश »
लोकनेता र चैतेजनता – होमर श्रेष्ठ
Tags: featured, homarshrestha, laghukatha, nepalikatha, nepalisahitya, sahitya
खबरडेस्क,२ फागुन । लघुकथा त्यो आमसभामा इतिहासमै धेरै मानिस वैरिएका थिए। टुँडिखेलको खुलामञ्चमा नअटाएका श्रोताहरू रत्नपार्कतर्फ कोचिँदै थिए। वीरअस्पालका कौसीमा, छेउछाउका घरका छतमा, अकासेपुलमा र सडककिनारका रुखका हाँगा-बिँगामा समेत चढेर मान्छेहरू हेर्दै थिए। धोजा-पताका, पोस्टर-पम्प्लिट र ब्यानरहरूले खुलामञ्च नयाँ दुलहीझैँ… बाँकी अंश »
Tags: divyarampokhrel, garima, kavita, madhupark, nepalilekrachana, sahitya
खबरडेस्क, २ माघ । सिमानाहरुले सीमिततामा बाँध्छन। एक अर्कालाई बाँड्छन्। समाजलाई भांड्छन्। फेरी पनि नयाँ-नयाँ सिमानाहरुका माग छन्। सिमानाहरू मान्छेभित्र छन् । मनभित्र छन्। घर-घरमा छन्। बिश्वास र भरमा छन्। शहर र नगरमा छन्। परिस्थितिमा छन्। राजनीतिमा छन्। रोजाइमा छन्।… बाँकी अंश »
Tags: alert-news, featured, garima, gopaljhapali, madhupark, nepalikatha, sahitya
खबरडेक्स, १९ पुस । – गोपाल झापाली मंशिरको अन्तिम साता । तराईको क्षेत्र । हुस्सु बिहान पख निक्कै बाक्लो लाग्न थालेको छ । पत्रपत्रिकामा शितलहरले सास्ति भोगेका चित्र र कतै कतै मनकारीहरुले न्याना कपडा बाँडेका समाचारले पनि प्राथमिकता पाउन थालेका छन्… बाँकी अंश »
कतिछन् कतिछन् छलछाम यहाँ – गजल
Tags: alert-news, gajal, garima, madhupark, nepaligajal, sahitya
खबरडेक्स, १९ पुस । गजल – कोमल भट्ट कतिछन् कतिछन् छलछाम यहाँ मन हुन्छ छुरा मुख राम यहाँ छलछाम सधैँ बलियो छ अति बरबाद गर्यो सब ठाम यहाँ छलछाम गरी कन देश डुब्यो विपरीत भए जब काम यहाँ छलकै छ कथा… बाँकी अंश »
Tags: bhupi, bhupikakavitaharu, bhupisherchan, featured, kabibhupi, sahitya
खबरडेस्क, १२ पुस । – कवि भूपि शेरचन यो हल्लै हल्लाको देश हो कानमा इयरफोन लगाउनु पर्ने बहिराहरु जहाँ संगीत प्रतियोगिताका जज हुन्छन् र जहाँ आत्मामा पत्थर परेकाहरु काव्यका निर्णायक मानिन्छन्, काठका खुट्टाहरु जहाँ रेसमा बिजेता हुन्छन् र जहाँ प्लाष्टर गरिएका… बाँकी अंश »
समय र सपनाहरु – कविता
Tags: alert-news, ghanashyamkhadka, nepalikabita, sahitya
खबरडेक्स, २७ मंसिर । – घनश्याम खड्का मनको हासियाले घास काटेर रहरको यौवनको डोको भर्दै गरेकी ए किशोरी आजकल तिमीले देख्ने गरेको सपनाको रङ्ग कस्तो छ हा ? मलाई जान्न मन लागेको छ मलाई सोध्न मन लागेको छ निःशन्देह यो निकृष्ट… बाँकी अंश »
च्याट मेनिया — पञ्च विस्मृत
Tags: alert-news, garima, katha, madhupark, nepalishortstory, sahitya
खबरडेक्स, २७ मंसिर । लु खा त साला …! मोबाईल फोन तीन टुक्रा भएर बजारियो, सिमेन्टमाथि । गोलभेडा भएको चेहरा सम्हाल्ने असफल प्रयत्न गर्दै बटुल्न लाग्यो, आफैले बजारेको आफ्नो फोनका टुक्रा शहिद । विवेक मुक थियो शहिदको त्यो दुर्दशा देखेर ।… बाँकी अंश »
हुन्न रैछ सोचे जस्तो, बहार आको छैन – गजल
Tags: alert-news, galjalnepali, garima, madhupark, nepaligajal, sahitya
खबरडेक्स, २७ मंसिर । गजल – जय प्रकाश विवश सम्झिएर रोए पनि भूल जस्तो भाको छैन तिम्रा याद जिन्दगीमा फूल जस्तो लाको छैन।। बिताउँदा सँगै पल के के सोच्यौ कुन्नी जिन्दगीका यात्रा अझै सहज भाको छैन।। प्राण भन्यौ, जीवन भन्यौ सँगै… बाँकी अंश »